Ngokuqinisekile, wonke umuntu ajwayelekile umqondo njengoba adsm zigonywe noma inoculated ngokumelene ngqi futhi Defter. A wokugoma ngokumelene ngqi futhi idiphtheria toxoids esigabeni.
Adsm umgomo izingxenye zalo
Ukugonywa ngokumelene ngqi - inhlanganisela idiphtheria nomhlathi-ngqi toxoids, okuyinto okwenziwa ngendlela ekhethekile futhi bayakwazi ukwaba idiphtheria nomhlathi-ngqi. Ngesisekelo khona i izifo ezithathelwanayo, futhi elisindayo zisabela kanjani umzimba womuntu ukuze ubuthi lwegciwane.
Isigaba kubhekisela esenzakalweni esiyisimangaliso ubuthi ukuhlanzwa kakhulu toxoid akuzona engabangela letindzala ubuthi ukuphendula amagugu, kodwa, yize kunjalo, kungabangela impendulo somzimba sokuzivikela.
Adsm yokugoma: mshini wezenzo
ubuthi Microbial ngokukhethekile kusetshenzwe futhi iguqulwe ibe toxoids. Kule nqubo, zingabantu ngokuphelele bancishwa ezinobuthi, kodwa ahlale immunogenic. Umphumela ukukhiqizwa kwamasosha omzimba ethize emzimbeni ngokushesha ngemva inoculation adsm. Ngaphezu kwalokho, inqubo akuyona ingozi ngokuphelele. Singasho ukuthi adsm wokugoma ngokuvumelana nethonya lazo umzimba has ukufana ne ngqi noma idiphtheria idluliselwe ngendlela elula, ngenkathi elingenalo yimuphi ezisongela ukuphila.
Ukugonywa adsm: isikhathi ukungena emzimbeni
Tetanus-idiphtheria toxoid zifakwa emzimbeni ngoba revaccination izingane iminyaka engaphezu kweyisithupha ubudala futhi abadala. National yokugoma schedule ibonisa ukuthi onyakeni wokuqala wokuphila, izingane zidinga ukugxilisa wokugoma DTP, okungase kuvikelwe ingane umzimba, hhayi kuphela ngokumelene idiphtheria nomhlathi-ngqi, kodwa futhi kusukela pertussis. Uma ngaphambi ngokuxhunyelelwa, ingane kade egula ne ukukhwehlela whooping kakade noma has Izimo ezikhona ngokwenza DTP futhi izingane ezine, neyisithupha, okuyinto engazange ubusengakehliswa wokugoma ngokumelene idiphtheria noma ngqi, ukuziphatha wokugoma yokugoma Td.
Ngaphezu kwalokho, eneminyaka engu-iminyaka eyisikhombisa nane ubudala, abadala iphathwa umgomo njalo ngemva kweminyaka eyishumi. wokugoma Adsm iqondiswa uma kunesidingo esiphuthumayo ukugoma, isb ngabantu kukhona nabo idiphtheria onesifo.
Izimo adsm imigomo
Akunakwenzeka ukuba bagome abantu kokuba ukungabekezelelani kule izidakamizwa kanye nabesifazane abakhulelwe. Ukwethulwa umgomo izifo sibi catarrhal imvelo Kuvumeleke kuphela endabeni ukuxhumana idiphtheria ogulayo. Uma lesi sifo sibangelwa omunye lwegciwane, lokugoma kufanele kwenziwe ngaphambili kuka amasonto amabili ngemuva nokuvuselelwa. Uma kukhona eminye yizifo ezingamahlalakhona, kuba adsm yokugoma kumele kwenziwe at the stage of ukuthethelelwa, okungukuthi, e-ukungabi khona noma yimuphi izimpawu isifo.
Izinkinga emva yokugoma adsm
Ezinsukwini zokuqala ezimbili zingavela yezinkinga adsm ngokuxhunyelelwa. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, i-iguliswa ukuphendula, ubuhlungu nokuvuvuka endaweni ekuphathweni wokugoma, siwasebenzise, ukucobeka imfiva. Okungatheni ukuphakamisa ukubukeka ukushaqeka anaphylactic njengoba ephendula ngokugoma.
Ukunciphisa ingozi imiphumela engemihle ukugonywa adsm
Ngaphambi wokugoma adsm ziyokhokhwa, udokotela kufanele ahlole: umzimba lokushisa nesilinganiso, ukuhlolwa nolwelwesi lwamafinyila. Uma ingane yakho ine imfiva. Kufanele ngokushesha yazisa udokotela.
Ingakapheli imizuzu engu-45 kusukela emtholampilo ngokushesha ngemva kokufaka wokugoma akufanele uhambe, kunjalo komzimba nezinto.
Uma ingane yakho yenza lokho kanye lokugoma, uyahlanganyela nabo is hhayi Kunconywa, kumele uya ekhaya. Kungcono ukuba ageze umntwana ngokushesha ngemva ngokugoma. Uma kuphakama izinkinga ezingase zivele ngemva kokufaka lokugoma, kufanele ngokushesha xhumana nodokotela wakho. Iyoyimisa imithi kudingekile ukuthi ngeke kuyilimaze impilo yakho.